Wajigii kowaad ee kaadh qaybinta G/Togdheer oo soo xidhmay | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 July 14 News Wajigii kowaad ee kaadh qaybinta G/Togdheer oo soo xidhmay
Wajigii kowaad ee kaadh qaybinta G/Togdheer oo soo xidhmay
Waxa maanta oo taariikhdu tahay 14kii July 2017 soo xidhmay dhamaan goobaha kaadhbixinta ee Caasimadaha labada gobol Maroodijeex iyo Togdheer. Dib waxa loo bilaabi doonaa wajigii labaad ee kaadh qaybinta degmooyinka oo socon doona 14 casho.
Xubnaha Guddida KDQ ee ku sugan Gobolka togdheer Komishaneer Cabdiraxmaan Cisman Aadan, komishaneer Saciid Cali Muuse iyo komishaneer Maxamed Jaamac iyo shaqaalaha KDQ ee ku sugan Gobolka Togdheer u kala direen kooxo qaybin doona kaadhka codbixinta ee ka soo noqotay goobaha degmooyinka Oodweyne iyo Buuhoodle oomaalinta bari ah bishuna tahay 15/07/2017 ka bilaab doonto kaadh qaybintu.
KDQ wuxu ku wargalinayaa Dhamaan muwaadiniinta aan qaadan kaadhka codbixinta in ay ka faa’iideystaan wajiga labaad oo socon doona mudo 14 maalmood ah.
Buuhoodle ——————– 15 July – 28 July
Oodweyne ——————– 15 July – 28 July
Salaxlay ———————– 15 July – 28 July
Gabilay ———————— 15 July – 28 July
Baligubadle ——————- 15 July – 28 July
A. Burco ——————————– 17 July – 30 July
B. Hargeysa ————————– 17 July – 30 July
Dhamaan labadaas gobal waxay ku soo xidhmi doonaan sidaas kor ku xusan.